Kukhalwa ngabahlomekisa isilomo se-Orlando Pirates - Ilanga News
Home Ezemidlalo Kukhalwa ngabahlomekisa isilomo se-Orlando Pirates
Kukhalwa ngabahlomekisa isilomo se-Orlando Pirates
Ziyaqina izinsolo zokuthi uLorch usefuna ukuwashiya amaBhakabhaka
ZIYA ngokuqina izinsolo zokuthi isibabuli somdlali we-Orlando Pirates kasisathandi ukudlala kule kilabhu, sesifuna ukuya e-Europe.
ILANGA lithole ngemithombo yalo encikene noThembinkosi Lorch odlala esiswini kwiBucs ukuthi lo mdlali akasathandi ukudlala kuleli, usefuna ukuya e-Europe. Lo mdlali ushaye ingcwenga yebhola ngesizini eyandulela esanda kusongwa, waze waqokwa njengomdlali ovelele. Nokho ngedlule ushaye into ephansi.
Kuthiwa into eyenze washaya into ephansi wukuthi kunabantu abebeqhamuka emaceleni bethembisa ukumyisa e-Europe kodwa kwagcina kungenzekanga.
Leli phephandaba lishayela uJazzman Mahlakgane okunguyena ophethe izindaba zalo mdlali uthe: “Ngibhekene nenkinga ngendaba kaLorch ngoba kunabantu abalokhu bembhayizisa, bekhuluma izinto ezingekho. Bheka nje ngesizini edlule wehlelwe yifomu ngoba kunezinto ezilokhu zimphazamisa.
“Ngicabanga ukuthi yizindlela zokumbulala nje lo mfana. NakuTeko Modise eminyakeni embalwa edlule kwenzeke into efanayo bethi uyafunwa phesheya kwagcina kungenzekanga lutho. Kangikhulumi ngamahemuhemu, uma kukhona omfunayo phesheya ngidinga into ebhalwe phansi bese ngikhuluma nePirates.
“Okwamanje kakukho kilabhu emfunayo lokho ngingakuqinisekisa. Ngiyacela nje nakubantu ukuthi uma kukhona ofuna ukwazi izinto ngoLorch axhumane nami ngqo, hhayi omunye umuntu.”
Previous articleZiphilela ukuhlenga izinyoka izelamani
Next articleIntombazanyana (13) itholwe izilengisile isifile ekameleni